Falanqayn diidmadii barlamaanka Puntland ee mudo kordhintii maxkamadda sare. – Radio Daljir
Falanqayn diidmadii barlamaanka Puntland ee mudo kordhintii maxkamadda sare.
Luulyo 24, 2016 5:30 b 0
Golaha wakiilada Puntland ayaa todobaadkii hore qaaday talaabo ugub ku ah baarlamaanka Puntland oo ah inay diideen codsi madaxwaynaha dowladda Puntland uu ku dalbanayay muddo kordhin loo sameeyo hogaanka maxkamadda sare Puntland oo waqtigoodii dhamaaday , iyagoona sidoo kale baarlamaanka kala diray maxkamadda sare Puntland.
hadaba talaabada baarlamaanka uu qaaday maxaa lagu fasiri karaa , ? maxayse tahay talaabada kale ee xigta kadib kala diristii maxkamadda sare ee Puntland , su’aalahaasi iyo kuwa kale oo arimaha garsoorka la xiriira ayaan waxaan ka waraysanay sharci yaqaan Muuse Cali Jaamac oo arimahan si’ aad ah ula socda.
Maxamuud Cabdi Ibraahim oo waraystay ayaa marka hore waydiiyay maxaa lagu fasiri karaa talaabadan baarlamaanka uu qaaday?
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Cabdifatax Cumar Geeddi.
Madaxweynaha oo ka qaybgelaya shir madaxeedka dowladaha carabta.